ESET: hurukuro yega yeLinuxAdictos | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, Misangano / Zviitiko / Hurukuro, Linux software
Muchaziva mose komputa chengetedzo kambani ESET, sezvo iri imwe yeanonyanya kuzivikanwa uye mutungamiri muchikamu chekuchengetedza cyber. Iyo iri muBratislava, Slovakia, asi parizvino ine mahofisi munyika zhinji. Iyo yakavambwa muna 1992 uye, sezvamunoziva mese, chimwe chezvayo zvinonyanya kuzivikanwa uye zvine mukurumbira zvigadzirwa ndeye inozivikanwa NOD32 antivirus software. Parizvino antivirus yako inowanikwa kune akasiyana mapuratifomu, kusanganisira GNU / Linux, ndosaka takaona zvichinakidza kuita iyi bvunzurudzo kuti tizive ESET zvishoma padhuze ...
Kunyanya, akatibatsira nemutsa Joseph Albors, musoro wekutsvaga nekuziva nezve ESET Spain. Naye tinopfuurira nehurukuro yedu yekubvunzurudza maVIP nemakambani ari muchikamu chetekinoroji chatakatanga nguva yadarika. Ndinovimba muri kunakidzwa nekubvunzurudzwa uku uye kuti pamwe chete tichadzidza zvishoma nezvazvo uye nezve misoro yataurwa. Saka pasina kumwezve kunonoka, hezvino zvirimo:
Linux Vanopindwa muropa: Ungakurudzira here kuti vashandisi veUNIX / Linux masisitimu aise antivirus?
Joseph Albors: Sevashandisi veGNU / Linux, macOS neWindows, ini handione zvipingaidzo kana ndichiisa mhinduro yekuchengetedza sezvo isingatapure mashandiro ehurongwa uye kwete chete inotibvumidza kuti tione kutyisidzirwa kunongedzwa kusystem yedu. Nenzira iyi, mune yakawanda multiplatform ecosystem, isu tinokwanisa kuona uye kubvisa kutyisidzira kunongedzwa kune mamwe mashandiro masystem ayo anowanzo tenderera kwavari uye kudzivirira ivo kunwa zvakaipa.
LxW: Iwe unoona iyo yekuchengetedza nzvimbo zvirinani pane masisitimu seGNU / Linux, Solaris, FreeBSD, macOS, nezvimwe, kupfuura mune kesi yeMicrosoft Windows?
JA: Panguva ino isu tinofanirwa kutsanangura zvakanyatsonaka zvatiri kureva kana tichidudza yega yega masisitimu. Izvo hazvina kufanana a Up-to-date uye inonyatso kutarisirwa GNU / Linux pane yechinyakare GNU / Linux ine akawanda ekuchengetedza maburi akaiswa pane yeIoT chishandiso iyo isingatombo gashira yekuchengetedza yekuvandudza. Nenzira imwecheteyo, a Windows 10 padanho revashandisi haina kufanana neWindows Server 2016 inotungamirirwa neyakajairwa sysadmin.
Mamiriro acho anochinja zvakanyanya kubva pane chimwe chiitiko kuenda pane chimwe, uye nepo Windows ichivandudza kuchengetedzeka kwayo zvishoma mumakore achangopfuura, padanho redesktop ichiri icho chinodiwa chevapari vemhosva (kunyange hazvo gadziriro yaro yekumisikidza ine chekuita nazvo ). Kune iro chikamu, kunyangwe GNU / Linux isina kana kutyisidzira muchimiro chemarware pane desktop masisitimu, mune dzimwe nharaunda umo sisitimu inoiswa mumidziyo ine mashoma manejimendi uye ekuchengetedza masimba uye ayo akagoverwa mumamirioni, mamiriro acho ari kunetseka.
Kana zvasvika kune macOS, taona kuti kutyisidzira kwakanangana nepuratifomu iyi kwakura zvishoma nezvishoma asi kusingamisike mumakore achangopfuura, saka vashandisi vepuratifomu iyi vangaite zvakanaka kufunga nezvekuchengetedzeka kwemaitiro avo kwakakosha.
LxW: … Uye mune iyo Android neIOS?
JA: Kunyangwe aya maviri masystem anoshanda aine UNIX semadzitateguru avo, kutonga kweApple pamusoro peIOS kwakonzerawo matsotsi kuti atarise pachikuva cheGoogle. Parizvino, kubvumidzwa kwesarudzo uye kuongorora maratidziro muzvitoro zviri pamutemo zvekambani imwe neimwe zvinokanganisa, Apple ichinyanya kuvharira uye nekudaro ichitadzisa huwandu hwezvinhu zvakashata zvakawanikwa zvine chekuita neavo vakaonekwa paApple.
LxW: Iwe unoronga sei kupa hukuru chengetedzo kune IoT?
JA: Kune akati wandei vhezheni, ESET mhinduro dzine yepamhepo network yekutarisa chishandiso. Iyi sarudzo inokutendera kuti utarise rauta uye mamwe madhijitari akangwara kwekusaziva kunozivikanwa, uchipa mazano ekuzvigadzirisa. Isu zvakare tine yakasarudzika yemahara solution ye Smart TV uye mamwe madivayiri ane Android TV iyo inodzivirira kubva kumatyisidziro anotungamirwa pachikuva ichi.
Isu tinoziva kuti chengetedzo yeInternet yezvinhu inyaya inofanirwa kutariswa uye izvi maficha akaiswa mune zvigadzirwa zvedu anongova mavambo. Isu tinoenderera mberi nekutsvaga nekuvandudza mhinduro dzinoenderana nezvinodiwa zveichi chakasarudzika ecosystem uye isu tinotarisira kubatsira mukuita kuti IoT ive nzvimbo yakachengeteka.
LxW: Pane inogona antivirus kambani kuita chero chinhu nezve zvakavanzika? Ini handisi kungoreva kudzivirira kurwiswa pachirongwa, asi, semuenzaniso, kudzivirira mamwe maapplication kubva kuunganidze ruzivo rwevashandisi, kana kudzivirira izvo izvo vamwe vanogadzira nemakambani vari kudaidza "bidirectional telemetry" ...
JA: Izvo hazvisi chete izvo zvinogona asi kuti zvinofanirwa kubatsira kuchengetedza zvakavanzika zvevashandisi vayo. Panyaya yeESET, tinoona maficha ari pachena ane huipi uye, pakuva application zviri pamutemo asi izvo zvinokanganisa kuvanzika kwedu neimwe nzira isina kunaka yatinoziva, isu tinozivisa mushandisi kuti vari kuyedza kurodha pasi kana kuisa chishandiso chinogona kusadikanwa.
LxW: Ndeapi mamwe matambudziko kana matambudziko awakatarisana nawo nguva pfupi yadarika maererano nechengetedzo?
JA: Kunyangwe paine chokwadi chekuti matsotsi mazhinji ane husimbe uye haana hunyanzvi mukugadzira malware, kune vashoma vanofarira kutiomesera zvinhu. Zvinotyisidzira senge izvo zvisingashandise chero mafaera asina kunaka uye kushandisa maturusi esisitimu akadai sePowerShell kana ayo anoshandisa akavimbika mapato echitatu kuparadzira uyezve ane zvitupa zviri pamutemo tyisidziro ine ngozi nekuti inoita kuti vashandisi vadzikise kurinda kwavo uye vobvumidza kupfuura dzimwe nzira dzekuchengetedza.
LxW: Vashandisi vanogona sei kubatsira mukuburitsa kana kuzivisa yakaipa code?
JA: Iwe unogona kubatsira nenzira dzinoverengeka, zvese nekutumira aya masampula ekuongorora masevhisi akadai seVirustotal (ayo anobva avagovanisa pakati pedzimba dzakasiyana dzeanodzivirira antivirus) kuti uzvitumire zvakananga kumarabhoritari edu neemail ku samples@eset.com.
LxW: Nei mamwe maantivirus akaiswa pasi pekufungirwa uye akaraswa kuti aiswe mune mamwe masisitimu ehurumende? Isu tese tinoziva nyaya yekambani inozivikanwa yeantivirus iyo yakarambwa neEurope. Ndoziva imhaka yekuti antivirus inopihwa mvumo izere, uye inogona kuva bakatwa rinocheka nekwose, asi ndinoda kuziva maonero ako ...
JA: Hatifungidzire zvinoitwa nevamwe vagadziri asi ESET, sekambani iri muEuropean Union, inoenderana nemitemo yazvino uye yakazvipira zvizere kuchengetedzeka kwevashandisi vayo. Nenzira imwecheteyo, isu tiri kupokana nekushandiswa kwekutyisidzira kunyangwe nezvinofungidzirwa zviri pamutemo uye, nekudaro, tinozozviona sezvatakaita pakutanga, kunyangwe zvichitorwa neboka rematsotsi kana hurumende kana bato repamutemo.
LxW: Ko antivirus yeLinux chiteshi chakareruka cheantivirus yeWindows? Ndokunge, isoftware imwecheteyo inotakurirwa kuti ikwanise kumhanyisa pane GNU / Linux masisitimu?
JA: Shanduro dzekuchengetedza kwedu mhinduro dzeGNU / Linux dzinogovana mamwe maitiro neaya eWindows uye macOS asi akagadzirwa kubva pakutanga kweiyi chaiyo chikuva. Muchokwadi, GNU / Linux server mhinduro dzinobvumidza yakanyanya kuwanda kumisikidza yehurongwa manejimendi kumisikidza sezvavanoda.
LxW: Iyo malware yekutsvaga injini mune iyo shanduro yeLinux inoona hutachiona hweWindows, rootkits, uye inonzi multiplatform (Flash, Java,…)? Kana chimwewo chinhu?
JA: Chokwadi, injini yekuongorora yakafanana neGNU / Linux pamwe neiyo macOS neWindows uye, nekudaro, inobvumidza kuwanikwa kwemuchinjikwa-chikuva malware, kusanganisira kutyisidzira kwema mobile operating system senge Android neIOS.
LxW: Chii chako chinonzi Linux antivirus software chinounza kuti makwikwi asingaite?
JA: Yedu chengetedzo mhinduro ine anopfuura makore makumi matatu ezviitiko uye inoratidza mune akati wandei akakosha mapoinzi. Chimwe chazvo kugona kuona kutyisidzirwa uye kuve ESET kambani inotungamira muchikamu ichi, inobvumira vashandisi vedu kuva nedziviriro inoshanda. Uye zvakare, yedu yekuongorora injini ndeimwe yeanokurumidza uye imwe inoshandisa zvishoma zviwanikwa, saka kukanganisa kune ino system kushoma.
LxW: Iwe unofunga kuti antivirus inozotsiviwa nemamwe maturusi ekuchengetedza munguva pfupi iri kutevera?
JA: Sekambani yanga iri mune ino indasitiri kweanopfuura makore makumi matatu, isu takanzwa iwo mubvunzo kashoma. Isu tinotenda nemoyo wese kuti antivirus yakadai yave nenguva yakareba ichichinja kuita mhinduro dzakaomarara dzekuchengetedza dzakagadzirirwa kubata nekutyisidzira kwepamberi. Iko kugadzirwa kwega kwega kwega kuri kwazviri, asi ESET ichaenderera ichitsigira gadziriso ine mitsara-mizhinji inoenderera ichiita kuti zvinhu zviome kune vanogadzira malware, vachigara vachifunga nezvehunyanzvi hwakanakisa hunowanikwa nguva dzese.
Usakanganwa kusiya zvaunotaura nezve kubvunzurudzwa… Ndinovimba wakazvifarira uye kuti une hanya nekutumira kwedu kuLxA, nekuti mamwe mabvunzurudzo aya achauya… Hatisati tapedza nhevedzano izvozvi!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » ESET: yega hurukuro yeLinuxAdictos
Lakka: shandura yako Raspberry pi kuita retro mutambo wekutamba